Dhaqaalaha iyo Siyaasadda | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 9
Wakaalada wararka ee Reuters oo heshey warbixin ay arrimaha Soomaaliya ka qortey hay’ada QM u qaabilsan cunaqabateynta hubka ee dalalka Eretria iyo Soomaaliya ayaa lagu sheegey in awood darida Soomaaliya ka heysato in ay bixiso mushaaraadka askartooda ama xataa ay siiso cuno waxa ay qatar galisey oo ay wax kama jiraan ka soo qaaday sanado badan oo howl adag ay ku jireen, iyo guulihii ay ka soo hooyeen dagaalka ay kula jireen Al-Shabaab. Labadii bil ee la soo dhaafey ayey warbixintu sheegtey in maleeshiyadka ku xiran Alqaacida ee Alshabaab ay u suurta gashey in ay qabsadaan xerooyin ay degenaayeen ciidamda …
Guddoomiyaha Guddiga Midowga Africa Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, ayaa u soo magacawday Ambassador Francisco Caetano Jose Madeira oo u dhashay dalka Mozambique inuu noqdo wakiilkeeda gaarka ah ee Soomaaliya iyo madaxa howlgalka AMISOM. Ambassador Francisco Caetano Jose Madeira, ayaa waxa uu beddeli doonaa Ambassador Maman Sambo Sidikou oo kasoo jeeda waddanka Niger. Tan iyo sanaddii 2010, Ambassador Madeira waxa uu ahaa wakiilka gaarka ah ee ururka Midowga Africa ee isku xirka ka hortagga argagixisonimada iyo agaasimaha xarunta fadhigeedu yahay magaalada Algiers ee Xarunta Afrika ee Daraasaadka iyo Cilmi-Baarista Argagixisada (ACSRT). Magacaabista madaxa cusub ee AMISOM ayaa imaneysa xilli ururka Midowga Afrika, …
Bangiyadda & KaydkaDhaqaalaha iyo Siyaasadda
In kastoo hadal haynta daabacaadda lacagta cusubi la soo bilaabmatay dawladda cusub ee ku meelgaarka ah (TFG), haddana ka dhabaynta arrintaasi waxay soo if baxday dhowrkii bilood ee la soo dhaafay markii xubno ka mid ah xukuumaddu warbaahinta u xaqiijiyeen in hawshaasi meel fiican marayso. Marka laga reebo waraysiyo dhowr ah oo u badan qaylo dhaan, dhaliillo iyo difaac maahee ma jiraan daraasado cilmiyaysan oo ku aadan daabacadda lacagta cusub iyo wixii dhib ama dheef ay dhabarka ku wadato oo ay soo bandhigeen xukuumadu. Dhinaca kalle waxaa muuqata in qaar ka mid ah ragga ugu aqoonta iyo waaya’ragnimada badan nidaamka maliyadeed …
Dowladda Soomaaliya iyo Bangiga Aduunka ayaa maanta magaalada Nairobi ku kala saxiixday heshiis mudo shan sano ah soconayo oo lacagta ku baxeysa mushaarka shaqaalaha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka lagu bixin doono. Lacagtaasi oo cadadkeeda dhan yahay 144 Milyan oo dollar, waxaana heshiiskaan DF u saxiixay Wasiirka maaliyadda Maxamed Aadan Ibraahim (Fargeeti), iyadoo dhanka Bangiga aduunkana ay u saxiixday Mss. Bella Bird oo bangiga aduunka u qaabilsan Soomaaliya. Saxiixa heshiiskan ayaa waxaa sidoo kale goob-joog ka ahaa wasiirka maaliyadda ee mamulkaPuntland C/llaahi Shiikh Axmed,wasiirka maaliyadda Jubbaland Ibraahim Xasan Cabdi iyo wasiirada Maaliyadda Galmudug iyo Koonfur galbeed Soomaaliya. Heshiiskan ayaa waxaa …
Dalka Nigeria Madaxweyne Muhammadu Buhari ayaa shaaca ka qaaday inuu isagu ahaan doono madaxa wasaarada shidaalka waxaanu hadalkani ka sheegay mar uu ka hadlayey xarunta Qaramada Midoobay ee magaalada New York. Nigeria ayaa 90% lacagteeda adag ka hesha Batroolka ay dhjeeofiso iyadoo qiimo dhaca batroolka caalamka ku yimid uu dalkaasi galiyey xaalad dhaqaale oo adag . Hay’adaha Batroolka ee Nigeria ayaa musuq maasuq ragaadiyay, waxaana madaxweyne Buhaari balan qaaday xilligii doorasahada inuu musuqa la dagaalami doono. Waxaa jiray tuhun ahaa in madaxwaynaha Nigeria Muhamadu Buhari uu isaga qaban doono xilka wasaarada shidaalka, hadda waxa uu xaqiijiyay in wasiir kalkaaliya uu …
Qoraalkaan kooban waxaan si kooban ugu faaloonayaa ciddii sameeysay ururada argagixisada iyo cidda ka faa’iida ururada argagixisada ee dunida ku soo badanaaya maanta. Waxaan qoraalkaan si gaar ah ugu faaloonayaa ururada aadka loo hadal haayo waqtiyadaan dambe. Jabhadaan kalle duwan oo caalamka aad u war hayaan ee sheegtay in magac Islaamka u dagaalamaan sidda Al-shabaab, Alqaacida, Daacish (ISIS), Bako Haram iyo kuwa kalle oo daafaha caalamka maanta ka dagaalamaan. Aqristaha sharafta leh waxaan weydiisanayaa inuu maskaxdiisa ka shaqeysiiyo kana jawaabo su’aalahaan soo socda: Yaa abuuray ama sameeyay ururadaan argagixisada ah? Maxay tahay sawabta loo sameeyay? Yeysa dan ugu jirtaa abuuritaanka …
Diinta iyo dowladda oo la kalla soocaa waxay shacabka fursad u siinayaan inay madaxdooda doortaan, isla markaana la xisaabtamaan. Diinta iyo dowladda oo la isku walaaqana waxaa ka dhalanaya in mas’uuliinta xafiisyada dowladda fadhiyaa halkii ay ka noqon lahaayeen kuwo bulshada u adeega, ay bulshadu ka noqoto tu iyadu u adeegta madaxda. Waayo, madaxdu waxay wakiil ka noqonayaan Eebbe, oo ay ku hadlayaan magaciisa, isla markaana fulinayaan dooniddiisa. Run ahaantiina, ma jirto cid la xisaabtami karta madax Alle matalaysa. Taariikhda islaamkuna waxay si cad u muujinaysaa in muslimiintu aysan weligood arag madax ay la xisaabtamaan, laakiin ay wax badan …
Shiinaha ayaa wuxuu qiimo dhimis ku sameeyay lacagta dalkiisa, laakiin maxay tahay sirta ku jirto? Inta badan dalalka caalamka waxay aad u jecelyihiin in lacagtooda kor usii kacdo marwalbo si ay u yeelato qiimo fiican. Hoos u dhaca qiimaha lacagta wadamada adduunka waxay tilmaamtaa in dhaqaalo xumo ay ka jirto dalalkaas. Shiinaha ayaa wuxuu ku jiraa dagaal lacageed balse ma yahay dagaalkaan mid uu ku guulaysani doono Shiinaha? Lacagta yuan ayaa hadda hoos u dhac ku timaaday 0.9 boqolkiiba marka la isku fiiriyo qiimaha dollarka.Taas bedelkeeda, dollarka Mareekanka wuxuu kor ugu kacay illaa 3.3 boqolkiiba kaga guuleystay mar kalle lacagta …
Inkastoo ay yihiin dalalka ugu horumarsan uguna ammaan badan dunida carabta, lixda waddan ee Gacanka Carabta, ayaa hadda waxaa soo foodsaartay laba qatar weerar oo argagixiso oo uga imanaysa Suniyiinta iyo Shiicada mayalka adag. July dhamaadkeeda, Bahrain ayaa aragtay weerarkii ugu waynaa ee lagu qaado boliiskeeda. bambaano ayaa ku qaraxday baabuur boliis ooo dishay laba boliis qaar kalena dhaawacday. Waxay rumaysan yihiin in qalabkan ugu dambeeyay uu ka yimid dagaallamayaal Shiica ah oo jooga dalka Ciraaq, oo ay maalgeliyeen isla markaana tababareen ciidanka ilaalada kacaanka Iran. Baxreyn waxay muddo dheer ku eedeynaysay Iran, gaar ahaanna shakhsiyaad ka tirsan hay’addeeda sirdoonka, inay wadaan …